अस्पतालमै नवजात शिशुको न्वारन, आमाको उपचारमा सहयोगको याचना | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार अस्पतालमै नवजात शिशुको न्वारन, आमाको उपचारमा सहयोगको याचना
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०४:५१
बालकृष्ण आचार्य बैदेशिक रोजगारमा कुवेत जाने तयारी गर्दा श्रीमति निशा सुबेदीको पेटमा सात महिनाको बच्चा हुर्किरहेको थियो । बेनीको एक सहकारीमा बजार प्रतिनिधिको काम गर्ने निशासँगै बेनी अस्पतालमा पुगेर भिडियो एक्सरेमार्फत चेकजाँच गरेका थिए । पहिलो सन्तानलाई स्वागत गर्न आतुर आचार्यको भिषा आएको खवरसँगै कुवेत हानिए।
आर्थिक रूपमा विपन्न आचार्य दम्पत्तीले पहिलो सन्तानको नाममा दर्जनौ सपना सजाइसकेका थिए । अस्पतालमा नियमित चेकअफसँगै बजार प्रतिनिधिको तलबलाई निशाले पहिलो सन्तानलाई आवश्यक पर्ने भन्दै जोहो गर्थिन् ।
तनहुँ बन्दिपुरका बालकृष्ण र बेनी नगरपालिका–५ पुलाचौरकी निशाले प्रेम विवाह गरेका थिए ।जन्मदिने बुबाको बेवास्तासँगै आमाको काखमा हुर्किएकी निशाले दुखलाई नजिकबाट चिनेकी थिईन् ।दुख–कष्ट भगवानले जन्मसँगै पठाएजस्तै बाल्यकालदेखि दुखको भूमरीमा हुर्किएकी निशालाई जीवनसाथी बनाएका बालकृष्णले धन कमाएर दुख लुकाउन विदेशीएका थिए ।
सुत्केरी अवस्थामा श्रीमति र बच्चालाई आवश्यक पर्ने खर्चको चिन्ताले आचार्यलाई निन्द्रा लाग्ने थिएन् । बजार प्रतिनिधिको जागिरबाट चलेको घरखर्चलाई समेत बालकृष्णको काँधमा आउने भएकाले पनि उनले कुवेतमा पुगेलगत्तै अनावश्यक खर्चलाई नगरी घर पठाउने योजनालाई डायरीमा कोरेका थिए । कुवेत पुगेको दुई महिनामा निशाले बेनी अस्पतालमा साउन २ गते अप्रेसनबाट बच्चा जन्माईन्।
साधारण प्रसूतिबाटै जन्माउने चिकित्सकको प्रयास सफल हुन नसकेपछि अप्रेसनको माध्यमबाट पहिलो सन्तान जन्मिएको खवरले कुवेतमा बालकृष्णलाई तत्कालै पुग्यो ।बालकृष्णले त्यो पहिलो खुसी निशालाई नै दिए ।
अस्पतालको बेडबाटै पहिलो सन्तान छोराको सन्देश कुवेतमा पाएका बालकृष्णले करिव ३ घण्टापछि श्रीमतिको पिसाव नियमित नभएको र थप उपचारका लागि पोखरा लैजानु पर्ने खवरले छागाबाट खसेजस्तै भए । अस्पतालका क्लिनिकल कोअर्डिनेटर डा. नवराज वस्ताकोटीले बच्चा स्वस्थ भएपनि निशाको पिसाव नियमित नभएपछि थप उपचारका लागी आफै पोखरासम्म पुगे।
जन्मिएको छोरालाई सँगै लिएर उपचारका लागि पोखरा गएकी निशाको क्रमिक सुधार आएपनि थप उपचारमा आर्थिक संकट देखिएको छ ।‘छोरीलाई अझै ६ महिनासम्म अस्पतालमै राख्नुपर्छ,‘उपचारमा आर्थिक समस्या भएको छ’ आमा फुलु सुबेदीले भनिन् । उनका अनुसार मृगौलामा खरावीको सम्भावना भएकाले नियमित औषधी सेवन सहित डाक्टरको निगरानीमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले सहयोगको याचना गरिन् ।
‘नाति जन्मिएको दिन देखिनै अस्पतालमा छौ,‘सुत्केरी छोरी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्’ उनले भनिन् । अस्पतालमा समान्य आर्थिक समेत नभएपछि म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले प्रारम्भीक उपचारका लागि बेनी अस्पतालका चिकित्सक डा. बस्ताकोटीको सिफारिसमा २५ हजार सहयोग गरेको छ । नियमित चेकजाँच, औषधी उपचार तथा मृगौलाको परिक्षणमा लाग्ने खर्चको अभावमा निशाले समेत अस्पतालबाटै सहयोगको याचना गरेकी छन् ।
के भएको छ निशालाई ?
प्रसूतीसँगै पिसाव रोकिएपछि चिकित्सकले मृगौला खरावी हुनसक्ने भन्दै तत्कालै थप परामर्श लिए ।बेनी अस्पतालमा डायलासिस सेवा उपलब्ध नभएकाले डा. बस्ताकोटीले प्रसूतीलगत्तै हुनसक्ने समस्या Acute Kidney failure को जोखिमलाई औलाए ।
सामान्यतया विरामीको औषधी वा अप्रेसनको बेलामा आमालाई समस्या हुनसक्छ । नेपालमा पछिल्लो समय बच्चाको जन्म भएपछि आमालाई यस्तो समस्या देखिने संख्या बढेको छ । म्याग्दीमा यस अगाडी पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । मृगौलामा समस्या देखिने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न तत्कालै नियमित उपचारको आवश्यकता हुन्छ । स्वस्थ मानिको पिसाब थैलीको क्षमता २ सयदेखि ३ सय मिलिलिटरसम्मको हुन्छ ।
थैली भरिनेवित्तिकै पिसाव फेर्न मन लाग्छ । दैनिक १५ सय एमएल पिसाब निस्कने मासिनले दैनिक समय समयमा पिसाव फेर्नुपर्छ । निशाको पिशाव थैलीमा समस्या देखिएपछि दैनिक १ सय एमएल पिसाव आउने गरेको अवस्थामा अहिले क्रमिक सुधार भई ३ सय एमएल पिसाव आउने गरेको बेनी अस्पतालका डा. बस्ताकोटीले बताए ।
‘सुधार आएको छ, अझै ६ महिना हेर्नुपर्छ’ डा. बस्ताकोटीले भने । उनले सुधार आए डायलासिस गर्न नपर्ने बताए । नियमित उपचारमा आर्थिक आवश्यक पर्ने भएकाले सहयोगको अपिल समेत गरे । उनले आफ्नै सक्रियतामा अस्पतालसम्म पु¥याएर नियमित चिकित्सकसँग जानकारी समेत लिइरहेको बताउँदै विपन्न परिवार भएकाले सहयोगको अपिल समेत गरे। उनले पिसाब थैली तथा नलीमा संक्रमण हुँदा विभिन्न समस्या देखिने बताए ।
हिन्दु धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख भए अनुसार मानिसको दश कर्म मध्ये नामकरण एक संस्कार हो । धार्मिक कार्य सम्पादन गर्नका लागि न्वारनबाट एउटा परिचय दिने गरिन्छ । शिशुको जन्म तिथि,घडी, पला, नक्षत्र, समय र स्थान आदिलाई आधार मानेर नामकरण गर्ने चलन रहेको छ ।
शिशु जन्मेको ११ औं दिनमा न्वारान गर्ने गरिन्छ । तर, बेनीको अस्पतालबाटै पोखरा पुगेका शिशुको २२ दिनमा अस्पतालमै सामान्य धार्मिक परम्परा अन्तरगत न्वारन गरिएको ।
करिव ३३ दिनको शिशुको नाम खुपी आचार्य राखिएको छ । शास्त्रमा बताइए अनुसार शिशु जन्मेको १० औं दिनसम्मलाई वृद्धि सूतक मानिएको हुनाले ११ औं दिनमा यो संस्कार गर्ने चलन रहेपनि अस्पतालमा समान्य प्रक्रियाबाटै न्वारन गरिएको आफन्तको भनाई छ । न्वारन गरिएपनि शिशुले प्रयाप्त हेरचाह पाएको छैन ।आमाले पनि सुत्केरी अवस्थामा रोगसँग लड्नुपर्ने बाध्यता छ । बच्चालाई संक्रमण हुनसक्ने भन्दै चिकित्सकले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेपनि निशाले आफ्नै काखमा सुताउने चाहन्छिन् ।
पूजारीले खुपी नाम राखिदिएपनि नामको अर्थ खोज्ने समय समेत परिवारलाई छैन् । बच्चा जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूध खुवाउनुपर्ने भएपनि आमा बिरामी भएकाले समस्या भइरहेको छ । आमाको दुधलाई अमृत समान मानिन्छ । नवजात शिशुसँगै आमाको अवस्था देखेर भेट्न जाने समेत भक्कानिन्छन् । पौष्टिक खानको अभावका कारण दुधमा समेत समस्या आउन सक्ने भएपनि आर्थिक अभावले समान्य खानपिनमा समेत अभाव खड्किएको छ ।
नामः निशा सुबेदी
खाता न ४८०७०१०००२९०८
Bank: ग्लोबल आईएमई बैंक बेनी शाखा